पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ज्येष्ठ २९ गते बिहीबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ! – हाम्रो देश
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ज्येष्ठ २९ गते बिहीबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । खानपानको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।ताजा खबरबाट